Faah faahin:- Dagaal beeleed ka dhacay deegaan u dhaxeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal beeleed ka dhacay deegaan u dhaxeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyo beeleed hubeysan uu dagaal aad u culus ku dhex maray deegaanka Buulo-Sheekh oo ku yaalla inta u dhaxeeysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye.
Dagaalkaasi oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegayaa inuu salka ku haayo lahaanshiyo dhul beereed, iyadoona ay weli jirto xiisadda dagaalkaasi oo soo bilawday shalay gelinkii dambe.
Illaa 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay dagaalkaasi ku geeriyootay, iyadoona 6 kale ay ku dhaawacantay sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka Buulo-Sheekh, waxaana dadka waxyeeladda soo gaartay u badnaa maleeyshiyo beeleedyadda halkaasi ku dagaalantay.
Dhinaca kale, odayaasha iyo waxgaradka kasoo kala jeeda maleeshiyo beeleedaasi ayaa bilaabay dadaalo ay ku qaboojinayaan xiisadaan, iyadoo halkaas loo diray guddi dhex-dhexaadiya labadaasi maleeshiyo beeleed.
Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii dambe waxaa deegano hoos yimaada gobolka Sh/dhexe kusoo batay dagaalo ka dhashay lahaanshiyaha dhulalka, iyadoo dhawaan lagu guuleystey in la joojiyo dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kaasoo salka ku haayay lahaanshiyaha dhul deegaan ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Sh/dhexe.